Kalluumeysatada ku dhex jira aquariums | Kalluunka
Invertebrates sidoo kale waa qeyb ka mid ah aquarium-keena Ilaa iyo inta aan jecel nahay iyaga, dabcan. Sidaa darteed waa inaan tixgelin siino faahfaahinta qaar daryeelka iyo la qabsiga aquarium-keena.
Meeshaan waxaad ka heli doontaa faahfaahin aan dhammaad lahayn ku saabsan invertebrates si aad si fiican ugu baran karto iyaga uguna raaxeysan karto sida ugu weyn quraaradda quraaradda. Noocyada, cuntada, cudurada, kaabista iyo dheer iwm. Taasi waxay ku farxi doontaa kuwa isjecel ee isjecel si ay ugu noolaadaan sida boqorrada ku dhex jira quraaradda gurigeenna.
Ha iloobin inaan ka hadlayno noolaha ay tahay inaan daryeelo, sidaa darteed dhammaantood macluumaadku waa yar yahay si loo hubiyo xaaladdiisa.
Noolaha noolaha ugu horreeya ee aan ka helno sagxadaha badda waxaan ku leenahay cnidarians. Waxay ku saabsan tahay…
Markii aan bilownay inaan meel dhigno wax kasta oo aquarium-ku u baahan yahay, waxaad u badan tahay inaad isweydiineyso haddii aad u baahan tahay aquarium snails. The…
Cars Japan caaro
Marar badan ayaad maqashay oraahda ah "xaqiiqda ayaa ka sareysa taageerayaasha." Tani waa waxa dhacaya markii ...
Maanta waxaan ka hadlaynaa nooc ka mid ah carsaanyooyinka loo yaqaan kuwa ugu weyn adduunka. Waxay ku saabsan tahay carsaanyo ...
Carsaanyo Mareykan ah
Maanta waxaan ka hadli doonnaa carsaanyo Mareykan ah. Waa carsaanyo casaan ah oo ka timid wabiga iyo ...
Adduunyada jellyfish waxaa ka buuxa xiisaha iyo noocyada runtii cajiibka ah. Kadib markaan si taxaddar leh u arkay una falanqeeyay ...
Jellyfish aan dhiman
Waxaad u badan tahay inaad maqashay oraahda ah "xaqiiqadu waa qariib sheeko male." Hagaag, waxna kama dheeraan karaan ...
Qolofleyda buluugga ah
Maanta waxaan ka hadli doonnaa mid ka mid ah noocyada xayawaanka ee u muuqda mid u gaar ah iyo ...
Kalluunka jellyfish waa mid ka mid ah xayawaannada ugu da'da yar ee jira. Waxay joogeen Dhulka in ka badan 600 milyan ...
by Jarmal Portillo samee 4 sano .
Maanta uma nimid inaan ka hadalno kalluun sida aan inta badan u hadalno. Maanta waxaan la kulannaa ...
Bayoolaji iyo qaab nololeedka qorsheyaasha
Qodobkan waxaan uga soconeynaa sharraxaadda kalluunka ilaa dixiriga badda. Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadli doonnaa qorsheeyeyaasha….
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato anemone badda